Wararka Maanta: Khamiis, Jun 13, 2013-Baarlamaanka Federaalka Somalia oo loogu Baaqay Dhameystirka Sharciga qabyada ah ee Ilaalinta Xuquuqda Aadanaha
Sharcigan ayaa waxaa baarlamaanka Soomaaliya u gudbiyay wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta Soomaaliya bishii hore dhammaadkeeda si ay uga doodaan xubnaha baarlamaanka ayna u ansixiyaan.
"Dhameystirka sharcigan wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa sidii gacan looga geysan lahaa wax ka qabashada arrimaha xuquuqda aadanaha ee Somalia ka taagan," ayay ku tiri agaaasime ku xigeenka Afrika ee HRW,Leslie Lefkow warbixin ay hay’addu soo saartay maalin ka hor.
Lefkow waxay hadalkeeda ku dartay. "Haddii sharcigan uu noqodo mid daciif ah wuxuu bilowgaba curyaamin doonaa guddiga baarlamaanka u qaabilsan dhianca xauquuqda aadanaha, waana in baarlamaanku uu hubiyaan inaysan taasi dhicin."
Guddiga baarlamaanka ee xuquuqda aadanaha, haweenka iyo arrimaha bini'aadannimada ayaa sharcigan gacanta ku haya, waxaana guddigan ay ku sameynayaan sharciga dib u eegis, si ay go’aan uga gaaraan kaddibna ay ugu soo celiyaan baarlamaanka.
Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in sharciga laga doonayo in uu dammaanad-qaado - guddi adag oo madax-bannaan kaasoo leh sharciyad ballaaran iyo awoodo dhaqan-galin.
"Sharci daciif ah oo lagula deg-dego baarlamaanka wuxuu dhibaato wayn ku noqon doonaa dhibbanayaasha badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo la klumay tacadiyo kala duwan oo dhinaca ban’aadamnimada ah,” ayay Lefkow ku tiri warbixinta.
6/13/2013 9:16 AM EST